u-De Kock ulingana nerekhodi le-SA ukuhlela ukunqoba kahle kwama-Proteas
u-Quinton de Kock uthole o-50 bama-ODI abahlanu belandelana ukulingana nerekhodi le-South African alibamba no-Jonty Rhodes ukuhlelela ama-Standard Bank Proteas endleleni yokuthi anqobe ngezinti eziyisithupha behlula i-Sri Lanka kusele ama-overs adlulile ku-17 kwi-Momentum One-Day International yesine e-St. George’s Park ngoLwesithathu.
Manje bangaphambili kwi-series ngo-4-0 futhi banethuba lokuyinqoba yonke imidlalo kumdlalo wokugcina e-PPC Newlands ngoMgqibelo (13h00). i-Sri Lanka idlale umdlalo obuthakathaka kuhambo lwabo njengoba bekhishwe bonke ngo-189 kuma-overs awu-39.2 futhi bekungaba kubi kakhulu kodwa i-innings yobuqhawe ye-Momentum Man of the Match u-Isuru Udana ofike kwi-crease kukubi ku-97/7 ekupheleni kwe-over yesi-25 futhi wathola u-78 (57 balls, 7 fours, 4 sixes) kuma-runs awu-92 akade esele kwi-innings.
Lapha kubalwa no-55 awenzile ngenhlanganiso yenti yesi-10 yama-runs awu-58 no-Kasun Rajitha – amathathu enziwe ama-wides – lokho kwenze irekhodi le-Sri Lanka ngenti yokugcina. u-Anrich Nortje uthole i-career best u-3/57 kuma-overs ayisishagalombili, kade ethole u-3/19 emuva kwama-overs akhe okuqala ayisithupha bese wathwala ukuhlasela kwa-Udana nge-spell sakhe esilandelile.
u-De Kock (51 off 57 balls, 6 fours) ubeke umphumela phambili emuva kokuba nenhlanganiso yenti yesibili yama-runs awu-56 nomdlali obuyisiwe u-Aiden Markram nama-runs awu-43 ngenti yesithathu no-Faf du Plessis. Ngesikhathi kuphuma u-De Kock umphumela ubusuwehlile kudingeka ama-runs awu-80 kuma-overs awu-29 futhi, nokho kuphume no-Du Plessis, umdlalo uqedwe u-David Miller no-JP Duminy.
u-Duminy, kade ebuya emuva kokulimala, ebesefomini enhle, wathola u-31 emabholeni awu-21 (4 fours, 1 six) engaphumanga futhi, bekuncane akade kumele akwenze ngesikhathi efika kwi-crease, i-innings yakhe ibinkulu kuma-Proteas ebusuku.
Ama-Proteas aphinde agqamisa ukujula kwabashwibi babo, bobabili u-Kagiso Rabada no-Imran Tahir bephunyuziwe, kwanika u-Dale Steyn ithuba lokuvela okokuqala kwi-series futhi kwavumela elinye ithuba la-Tabraiz Shamsi ophose kahle njengabanye wathola u-1/34 kuma-overs awu-10.
u-Amla uzophuthelwa ukuphela kwe-ODI series ngesizathu sobubele i-CSA ihalalisela ama-Proteas ngokunqoba i-Sri Lanka ODI series Ikhulu la-De Kock lihlelela ama-Proteas ukunqoba nge-DLS ne-series ngo-3-0 De Kock leads with the bat before Proteas quicks finish the job i-2019 ICC Cricket World Cup kuzoba ama-ODI ka-Tahir okugcina u-Imran no-Faf bahole indlela njengoba ama-Proteas enqobe i-ODI yokuqala i-CSA imemezela amankontileka amaqembu ama-Proteas ka-2019/20 i-CSA iphoxwe u-Olivier onqabe inkontileka yesizwe u-Ngidi ubiziwe kwiqembu lama-Proteas le-ODI; u-Nortjie umdlali omusha i-Sri Lanka igubha umlando ngokunqoba i-series ngo-2-0 i-Sri Lanka izinika ithuba lokugubha umlando ngokunqoba